SAWIRRO: Duqa Muqdisho oo dardaaran muhiim siiyay Xooggaga Wadaniyiinta | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA SAWIRRO: Duqa Muqdisho oo dardaaran muhiim siiyay Xooggaga Wadaniyiinta
SAWIRRO: Duqa Muqdisho oo dardaaran muhiim siiyay Xooggaga Wadaniyiinta
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) oo u soo xiray Xooggaga Wadaniyiinta Siminaar socday muddo shan casho ah oo lagu baranayay Maamul Wanaangga ayaa ku booriyey in ay dardargeliyaan dadaalladooda ku aaddan dib-u-dhiska dalka.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir ay ka go’an tahay xoojinta dhaqdhaqaaqan ku saleysan isxilqaannimada iyo wax-wada-dhiska bulshadu hormuudka u tahay.
Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa tilmaamay in la joogteyn doono aqoon-kororsiyada ku saleysan maamul wanaagga oo muhiim u ah shaqada xoogagga Wadaniyiinta ah ee ku saleysan Is-xilqaanka, maadama ay qeyb ka tahay qorshaha Qaran ee dib u dhiska iyo difaaca dalka.
“Siminaarkan waxuu ahmiyad gaar ah ugu fadhiyaa dib-u-dhiska dalka ee hormuudka u yihiin xooggaga wadaniyiintu , waxaana idinka sugeynaa in gacanna aad ku dhistaan dalkiina midna aad ku difaacdaan, idinkoo ka hortagaya qorshe kasta oo curyaaminaya horumarka dalkiinna”.
Siminaarka ayaa waxaa ka soo qeyb galay 140 xubnood oo isaga kala yimid Degmooyinka Caasimadda, Degmada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug iyo Saraakiil ka socotay Hay’adaha Ammaanka dalka.